အာဆင်နယ်နောက်ခံလူသစ် လစ်ခ်ျစတိုင်နာနဲ့ ခဏတာ တွေ့ဆုံခြင်း
6 Jun 2018 . 2:09 PM
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ ဝါရင့်နောက်ခံလူ လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner ကို ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် အာဆင်နယ်အသင်းက အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၃၄)နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner ဟာ ညာနောက်ခံလူအဖြစ် ကစားနိုင်သလို၊ ဆွစ်ဇာလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ တရားဝင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner ရဲ့ အင်တာဗျူးတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မေး – အာဆင်နယ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ် လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner ရေ။ ဒီအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အပေါ် ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
ဖြေ – ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ကာလတစ်ခုပါပဲ။ ဒီအသင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဂျူဗင်တပ်စ်ကနေ အာဆင်နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။
မေး – အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေက အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့လဲ။
ဖြေ – ဒါက စီမံကိန်းတစ်ခုပါပဲ။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို တစ်ကျော့ပြန် ဝင်ခွင့်ရဖို့က စီမံကိန်းတစ်ခုပါပဲ။ အာဆင်နယ်အသင်း ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်မရတာက အသင်းအတွက် ခက်ခဲမှု တစ်ခုလို့ ထင်တယ်။ အသင်း၊ ကစားသမားတွေနဲ့ အီမရိတ်ကွင်းကြီးက စီမံကိန်း တစ်ခုပါပဲ။ အမြင့်ဆုံး အဆင့်ကို ပြန်သွားဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာတွေက ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အပိုင်းအခြားမှာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ဘယ်လို အမှတ်တရတွေ ရှိဖူးလဲ။
ဖြေ – အာစင်ဝင်းဂါး အသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကာလမှာ ကျွန်တော် အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်မဆိုင်ဖူးပါဘူး။ သူဟာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှု တချို့ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး အသင်ကြီး အဆင့်တစ်ဆင့်ကို ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြ တစ်ယောက်ပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ သူလည်း အသင်းက ထွက်သွားပါပြီ။ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ အရာအားလုံးက အသစ်တွေဖြစ်နေပါပြီ။
မေး – နည်းပြသစ် အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့အကြောင်း ဘယ်လောက်ထိ သိထားလဲ။
ဖြေ – သူက အကောင်းဆုံး နည်းပြတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဆုဖလားတချို့ကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ ယူရိုပါလိဂ်မှာ ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာ သက်သေပါပဲ။ ကစားသမားတွေ တိုးတက်လာအောင် ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတဲ့ နည်းပြတစ်ယောက်ပါ။ လေ့လာမှုတွေ မပျက်တန်း လုပ်နေဖို့ကတော့ အရေးကြီးတာပေါ့။
မေး – လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner ရဲ့ ကစားပုံက ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော့် ကစားပုံလား . . . ကျွန်တော်က ညာနောက်ခံလူနေရာကနေ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါ ကစားတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ နောက်တန်းကို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ တိုက်စစ်နဲ့ ခံစစ်ကြားမှာ မျှတအောင် ကစားနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးပါပဲ။
အာဆငျနယျနောကျခံလူသဈ လဈချြစတိုငျနာနဲ့ ခဏတာ တှဆေုံ့ခွငျး
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး ကုနျဆုံးခဲ့တဲ့ ဝါရငျ့နောကျခံလူ လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner ကို ပရီးမီးယားလိဂျကလပျ အာဆငျနယျအသငျးက အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ အသကျ (၃၄)နှဈ အရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner ဟာ ညာနောကျခံလူအဖွဈ ကစားနိုငျသလို၊ ဆှဈဇာလနျလကျရှေးစငျအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျလညျး ဖွဈပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ တရားဝငျ စာခြုပျခြုပျဆိုပွီးနောကျ လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner ရဲ့ အငျတာဗြူးတခြို့ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မေး – အာဆငျနယျကနေ ကွိုဆိုပါတယျ လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner ရေ။ ဒီအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့အပျေါ ဘယျလိုခံစားရလဲ။
ဖွေ – ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ ကာလတဈခုပါပဲ။ ဒီအသငျးနဲ့ ကွီးမားတဲ့ စိနျချေါမှုတှကေို ရငျဆိုငျဖို့ ဂြူဗငျတပျဈကနေ အာဆငျနယျကို ပွောငျးရှခေဲ့တာပါ။
မေး – အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှကေ အသငျးပွောငျးရှဖေို့ ဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့လဲ။
ဖွေ – ဒါက စီမံကိနျးတဈခုပါပဲ။ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲကို တဈကြော့ပွနျ ဝငျခှငျ့ရဖို့က စီမံကိနျးတဈခုပါပဲ။ အာဆငျနယျအသငျး ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲမှာ ပါဝငျခှငျ့မရတာက အသငျးအတှကျ ခကျခဲမှု တဈခုလို့ ထငျတယျ။ အသငျး၊ ကစားသမားတှနေဲ့ အီမရိတျကှငျးကွီးက စီမံကိနျး တဈခုပါပဲ။ အမွငျ့ဆုံး အဆငျ့ကို ပွနျသှားဖို့ ကွိုးပမျးနတောတှကေ ဆှဲဆောငျမှုဖွဈခဲ့ပါတယျ။
မေး – ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈအပိုငျးအခွားမှာ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ ဘယျလို အမှတျတရတှေ ရှိဖူးလဲ။
ဖွေ – အာစငျဝငျးဂါး အသငျးကို ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ကာလမှာ ကြှနျတျော အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ ထိပျတိုကျ ရငျမဆိုငျဖူးပါဘူး။ သူဟာ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ ဆုဖလားအောငျမွငျမှု တခြို့ကို ရယူနိုငျခဲ့ပွီး အသငျကွီး အဆငျ့တဈဆငျ့ကို ရောကျရှိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွ တဈယောကျပါ။ အခုအခြိနျမှာတော့ သူလညျး အသငျးက ထှကျသှားပါပွီ။ စိနျချေါမှုအသဈတှနေဲ့ အရာအားလုံးက အသဈတှဖွေဈနပေါပွီ။
မေး – နညျးပွသဈ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery နဲ့ ပတျသကျပွီး သူ့အကွောငျး ဘယျလောကျထိ သိထားလဲ။
ဖွေ – သူက အကောငျးဆုံး နညျးပွတှထေဲက တဈယောကျပါ။ ဆုဖလားတခြို့ကို ရယူနိုငျခဲ့တယျလေ။ ယူရိုပါလိဂျမှာ ဘယျလိုစှမျးဆောငျခဲ့လဲဆိုတာ သကျသပေါပဲ။ ကစားသမားတှေ တိုးတကျလာအောငျ ဘယျလိုစှမျးဆောငျရမလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိတဲ့ နညျးပွတဈယောကျပါ။ လလေ့ာမှုတှေ မပကျြတနျး လုပျနဖေို့ကတော့ အရေးကွီးတာပေါ့။
မေး – လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner ရဲ့ ကစားပုံက ဘယျလိုမြိုးဖွဈမလဲ။
ဖွေ – ကြှနျတေျာ့ ကစားပုံလား . . . ကြှနျတျောက ညာနောကျခံလူနရောကနေ တိုကျစဈကို လိုကျပါ ကစားတဲ့ ပုံစံမြိုးပဲ။ ဘယျအခြိနျမှာ တိုကျစဈကို လိုကျပါရမယျ၊ ဘယျအခြိနျမှာ နောကျတနျးကို ကာကှယျရမလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိပါတယျ။ တိုကျစဈနဲ့ ခံစဈကွားမှာ မြှတအောငျ ကစားနိုငျတဲ့ ပုံစံမြိုးပါပဲ။